प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने चार जना प्रहरी नियन्त्रणमा – News Dainik
News desk १९ बैशाख २०७९, सोमबार १०:०० उर्जा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै आइतबार चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर कार्कीले दोर्दी गाउँपालिका-१, ढोकेबेंसीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा तार टाँग्दै गर्दा डोरी काटेको भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
डिएसपी कार्कीका अनुसार उनीहरूले प्रसारण लाइनको एउटा गाडीमा पनि तोडफोड गरेका छन् । पीडितले २२० केभी प्रसारण लाइनमुनि आफ्नो घरजग्गा रहेको र प्रभावित भए पनि पीडितको सुनुवाइ नभएको भन्दै पीडितहरूले संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले तार टाँगिरहेको समयमा डोरी काटेको र गाडी तोडफोड गरेपछि दोर्दी गाउँपालिका १ ढोकेबेंसीका पवित्रा थापा, राजेश थापा, सञ्जीव थापा र सन्तोष गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अघिल्लॊ कस्तो अवस्थामा हुन्छ मत बदर ?
पछिल्लॊ कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? (विवरणसहित)
काठमाडाैँ । लमजुङकाे न्यादी आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-६ स्थित …